Hot News-26 March 2010 - video.phpmyanmar.com
Hot News-26 March 2010
Posted By - Ko Ko - March 26, 2010
Discovery Channel Featured
Star Figure Skater Kim Yu-na
တောင်ကိုးရီးယားသူရဲကောင်း Kim Yu-na
ကနေဒါ နိုင်ငံ တွင် ကျင်းပ ပြီးစီးသွား ခဲ့သော ၂၀၁၀ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီး figure skate တွင်တောင် ကိုးရီးယား နိုင်ငံမှ Kim Yu-na (19) သည် ပထမ ရွှေတံဆိပ် ကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့ ပါသည်။
Kim Yu-na ပြိုင်ပွဲ ဝင်နေစဉ် တနိုင်ငံ လုံးနီးပါး TV ထိုင်ကြည့် နေကြ သဖြင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့ ပါသည်။ Kim Yu-na ကို တောင်ကိုးရီးယား သူရဲကောင်း အဖြစ် မှတ်ယူ ကြပြီး Queen Yuna ဟု အမည် ပေးထား ပါသည်။
Kim Yu-na အကြောင်း documentry ရုပ်ရှင် ကို Discovery Channel မှ ဖေဖဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ က တကမ္ဘာ လုံးသို့ ထုတ်လွှင့် ပြသ သွားခဲ့ ပါသည်။
Source : Discovery Channel To Feature Seoul And Star Figure Skater Kim
ကျွန်တာ့ Twitter Account ဟာအတုကြီးပါ
ကျွန်တာ့ Twitter Account ဟာ အတုကြီး ပါလို့ Lee Min-ho (F4) မှ ကြေငြာ သွား ပါတယ်။ Lee Min-ho ရဲ့ အမည် ကိုသုံး ပြီး မသမာ သူတစ်ဦး မှ Twitter မှာ register လုပ်ထာ.တဲ့ account အတု ဖြစ် ပါတယ်။ Follower ၇ သောင်းကျော် ရှိတယ် လို့လည်း သ်ိရ ပါတယ်။။
Source : Lee Min-ho Warns Fans About Fake Twitter Account
"Alice In Wonderland" Leads Korean Box Office For 2nd Week
ဒါရိုက်တာ Tim Burton ရိုက်ကူသည့် ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် Alice In Wonderland သည် ကိုးရီးယား တွင် ၂ ပါတ်မြောက် လူကြည့် အများဆုံး ရုပ်ရှင် အဖြစ် ရပ်တည် လျက်ရှိ ပါသည်။
Source : "Alice In Wonderland" Leads Domestic Box Office For Second Week
Kim Tae-hee, Lee Joon-ki To Star In Film "Grand Prix"
Lee Joon-ki နှင့် Kim Tae-hee တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်သစ်
မင်းသား Lee Jun-ki နှင့် မင်းသမီး Kim Tae-hee တို့သည် Grand Prix အမည်ရှိ ရုပ်ရှင်သစ် တစ်ကား ရိုက်ကူး ကြမည်ဟု သိရ ပါသည်။
Source : Kim Tae-hee, Lee Joon-ki To Star In Film "Grand Prix"
Lee Joon-ki To Star In New TV Series "Faith"
Rain ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူး သော ဓါတ်ပုံ ၅၉ ပုံကို Seoul မြို့တွင် ပြီးခဲ့သော အပတ်က ပြပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါ တယ်။ ပြပွဲကို My Sweethearts လို့ အမည် ပေးထား ပါတယ်။
Source : Pop Icon Rain Showcases Photos In Exhibition
လောလောဆယ် စစ်ထဲသို့ ရောက်နေသော အနုပညာ သည်များဖြစ် ကြတဲ့ Lee Dong-wook, Lee Jin-wook, Jae Hee နဲ့ On Joo-wan တို့ဟာ ကိုးရီးယား တပ်မတော် TV station KFN မှ တင်ဆက်တဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင် အသုံးတော်ခံ သွားကြ ပါတယ်။
Source : Korean Stars At Shine At Korean Military Concert
Yoo Seung-joon's New Film "Little Big Soldier" Low Audience
Jackie Chan ဇာတ်ကားလူဝင်အလွန်နည်းခြင်း
Jackie Chan ပါဝင်ပြီး ဒါရိုက်တာ Yoo Seung-joon ရိုက်ကူးသည့် Little Big Soldier အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ကို ကိုးရီးယား တွင် ရုံပေါင်း ၁၄၈ ရုံတွင် တပြိုင်နက် ပြသ ခဲ့ရာ ပထမ ၂ ရက်တွင် စုစုပေါင်း လူ ၇၃၀၀ သာ လာရောက် အားပေးပြီး အလွန် အခြေ အနေ ဆိုးတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Yoo Seung-joon's New Film "Little Big Soldier" Low Audience
မင်းသမီး Kim Hee-seon (လွမ်းမပြေ) ဟာ လင်ယူ သားမွေး နဲ့ အလုပ် များနေပြီး အနုပညာ လောက ကနေ အတော်ကြာ (၄နှစ်) ပျောက်နေ ခဲ့ပါတယ်။ အခု တရုတ် ရုပ်ရှင်ကား Whole Nation နဲ့ ပြန်လည် ပေါ်ထွက် လာပါ တော့မယ်။
Source : Kim Hee-seon Returning Through A Chinese Film?
Rain ရဲ့ album အသစ်
အာရှ တခွင် tour လုပ်နေတဲ့ Rain ဟာ Legend of Rainism Asia Tour Japan Final အမည် ရှိတဲ့ show ပွဲကို ဂျပန်မှာ နောက်ဆုံး ကျင်းပပြီး Korea ကိုပြန်လာ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်တိုက်ပဲ mini-album အသစ် တစ်ခု ထုတ်ဝေမယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
Source : Rain To Wrap Up Asia Tour And Release New Mini-album
Hero (TVXQ) ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်မည်
TVXQ တီးဝိုင်း အဖွဲ့မှ Hero Jae-jung ဟာ ဂျပန် TV ဇာတ်လမ်းတွဲ Because I’m Not Honest တွင် ဂျပန် မင်းသမီး Juri Ueno နှင့် တွဲဖက် ပြီးရိုက်ကူး တော့မည် ဖြစ်ပါတယ်။
Source : TVXQ Member To Star In A Japanese Drama
Hero Jaejoong to appear in Japanese TV series
Han Hyo-joo And Lee Seung-gi In Japan
Han Hyo-joo နှင့် Lee Seung-gi ဂျပန်သွားခြင်း
မင်းသမီး Han Hyo-joo နှင့် မင်းသား Lee Seung-gi တို့ဟာ ဂျပန်သို သွားပြီး သူတို့ရဲ့ Shining Inheritance အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို promotion လုပ်ကြ ပါတယ်။ Shining Inheritance ဟာ ကိုးရီယား မှာ rating 46% အထိ ရခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသမီး Lee Dae-hae, မင်းသား Jang Hyeok နဲ့ မင်းသား Oh Ji-ho တို့ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ပြသဆဲ The Slave Hunters (KBS) ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ အထူး လူကြိုက် များနေ ပါတယ်။
ရှေးခေတ် က ကိုးရီးယားမှာ ကျေးကျွန်များ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ၄င်းကျွန်များ ထွက်ပြေးရင် ပိုင်ရှင် များက ဆုငွေ ထုတ် ပါတယ်။ ဆုငွေ ရဖို့ ကျွန်ဖမ်းမုဆိုး (slave hunter) များပေါ်လာ ပါတယ်။ မင်းသား Jang Hyeok ဟာ ကျွန်ဖမ်းမုဆိုး အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ပါတယ်။
Source : Fact Vs. Fiction In 'Slave Hunters'
မင်းသား Jang Dong-gun ဟာ မကြာမှီ က ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ fan meet မှာ သူနဲ့ မင်းသမီး Ko So-young တို့ လာမဲ့ မေလ ၂ ရက် နေ့မှာ လက်ထပ် ကြတော့မဲ့ အကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာ သွား ပါတယ်။
Source : Jang And Ko Set A Date
Three Brothers ဇာတ်လမ်းတွဲလူကြိုက်များနေဆဲ
ပြသဆဲ ဇာတ်လမ်းတွဲ များရဲ့ လူကြိုက်များ မှုဟာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁. Three Brothers ၃၅.၇%
၂. The Slave Hunters ၃၂.၇%
၃. Happy Sunday ၂၇.၄%
မင်းသမီး Kim Hye-soo နဲ့ ဇာတ်ပို့ မင်းသား Yoo Hae-jin တို့ဟာ date လုပ်နေ ကြတဲ့ အကြောင်း ဇန်နဝါရီ လ ၄ ရက်နေ့က ၄င်းတို့ရဲ့ agency များမှ တဆင် ထုတ်ပြန် ခဲ့ ပါတယ်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းမှာ ၂ ယောက် စလုံး သတင်းထောက် များရဲ့ မေးခွန်း များကို မဖြေပဲ ရေငုံ နှုတ်ပိတ် နေကြတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Source : Kim Hye-soo Mum on Yoo Hae-jin
အနုပညာသည် များဖြစ် ကြတဲ့ Rain, Se7en, Lee Hyo-lee နဲ့ BoA တို့ဟာ ကိုးရီးယား ပြင်ပမှာ လှုပ်ရှား နေကြတာ ကြာပါပြီး။
သူတို့ အဝေးရောက် နေစဉ်မှာ အုပ်စုလိုက် (group bands) များက အဆို လောက ကို လွှမ်းမိုး လာကြ ပါတယ်။ Solo ခေါ် တစ်ဦးချင်း အဆိုတော် များချွန်ပြီး ပေါ်ထွက် လာတာ မတွေ့ ရပါ။
Rain, Se7en, Lee Hyo-lee နဲ့ BoA တို့ပြန်လာ ခြင်းဖြင့် solo အဆိုတော် အသစ်များ ပေါ်ပေါက် ဖို့ အထောက် အကူ ဖြစ်လာ မယ်လို့ မျှော်လင့် နေကြ ပါတယ်။
Source : Rain, Se7en, Hyo-lee, and Boa to Return to Korea
Korean cultural center to open in Kazakhstan
Kazakhstan နိုင်ငံတွင်ကိုးရီးယား Culture Center ဖွင့်ခြင်း
Soviet Russia ရဲ့ ပြည်နယ် တစ်ခုမှ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ပေါ်ပေါက် လာခဲ့တဲ့ Kazakhstan နိုင်ငံမှာ ကိုးရီးယား Culture Center တစ်ခု ဖွင့်လှစ် လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Korean cultural center to open in Kazakhstan
မင်းသား Lee Byeong-Heon နဲ့ မင်းသမီး Kim Tae-hee တို့ ပါဝင် ခဲ့တဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ ပါပြီး။
IRIS-2 စဖို့ လုပ်နေကြ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Lee Byeong-Heon ပါမှာ မဟုတ် တော့လို့ IRIS-1 မှာ အပြီး သတ်ပစ် လိုက် ပါတယ်။
IRIS-2 မှာပါမဲ့ ဇာတ်လိုက် အသစ် များကတော့ မင်းသား Jeong Woo-seong နဲ့ Cha Seung-won တို့ဖြစ် ပါမယ်။ မင်းသမီး ကတော့ ရွေးနေ ဆဲပါ။
Source : 'Iris' Season2Cast Revealed
Han Chae-young and Lee Byeong-Heon in "The Influence"
Online ရုပ်ရှင် "The Influence"
မင်းသား Lee Byeong-Heon နဲ့ မင်းသမီး Han Chae-young တို့ဟာ The Influence လို့အမည် ရှိတဲ့ online digital ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေပါတယ်။
The Influence ဟာ episode ၃ပိုင်း ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ရုံတင် ပြမှာ မဟုတ်ပဲ internet online ပေါ်မှာ ကြည့်ကြ ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
Han Chae-young in "The Influence"
Lee Byeong-heon says filming "The Influence" was like shooting "IRIS"
တပ်ထွကိကြီး Gong Yoo ရဲ့ဂျပန် Fan Meet
တပ်ထဲ ကနေ မကြာခင် ကမှ ထွက်လာတဲ့ မင်းသား Gong Yoo ဟာ fan meet များကို ဂျပန် နိုင်ငံ Kobe မြို့ နဲ့ Yokohama မြို့တို့မှာ ဖေဖဝါရီ လကုန် ပိုင်းက ကျင်းပသွား ပါတယ်။ Japan, China, Hong Kong နဲ့ Taiwan တို့မှ ပရိသတ် ၇၀၀၀ ကျော်တက်ရောက် ခဲ့ကြတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Gong Yoo wraps up Japan fan meeting in success
Secret Reunion ရုပ်ရှင်လူကြိုက်များနေခြင်း
Secret Reunion အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်တဲ့ ဖေဖဝါရီ ၂၆ ရက် ညနေမှ ၂၈ ရက် အတွင်းမှာ ကြည်သူ ၄၅၈, ၀၃၈ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ယနေ့ အထိ ကြည်သူ 4.2 million ရှိသွားပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
Source : "Secret Reunion" maintains hold on Korean box office
အဆိုတော် Shin Seung-hun ရဲ့ဂျပန် Concert များ
အဆိုတော်သက် အနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ pop singer Shin Seung-hun ဟာ ဂျပန်မှာ concert များ ဆက်တိုက် ကျင်းပရန် စီစဉ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Shin Seung-hun to hold concerts in Japan this week
Shin Hyeon-joon Becomes Acting Professor
မင်းသား Shin Hyeon-joon ဟာ ကိုးရီးယား နိုင်ငံ Induk University ရဲ့ Department of Broadcasting and Entertainment မှာ ပါမောက္ခ (Professor) အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Shin Hyeon-joon Becomes Acting Professor
Park Seon-yeong to Wed in May
မင်းသမီး Park Seon-yeong လက်ထပ်တော့မည်
မင်းသမီး Park Seon-yeong (35) ဟာ မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လက်ထပ် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမည် Kim လို့သာ သိရတဲ့ သတိုးသား နဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က blind date တစ်ခုမှာ တွေ့ခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Park Seon-yeong to Wed in May
Lee Da-hae (ချိုဝမ်) ဟောလီဝုဒ်သွားတော့မှာလား
ဟောလီဝုဒ် Warner Brothers ကပြုလုပ်တဲ့ ဧည့်ခံပွဲ သို့ မင်းသမီး Lee Da-hae တက်ရောက် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ထိုပါတီပွဲသို့ ဖိတ်ကြား ခံရတဲ့ တစ်ဦး တည်းသော အာရှ တိုက်သူ မင်းသမီး လည်းဖြစ် ပါတယ်။ Lee Da-hae ဟာ အင်္ဂလိပ် နဲ့ တရုတ် ဘာသာ စကား တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Warner Brothers ရဲ့ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ဖြစ်သူ Brad Globe က မင်းသမီးရဲ့ အရည်အသွေး များကို အထူး စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
Lee Da-hae and WB?
"Road No. 1" cast at MOU signing
Road No.1 အမည်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်
Road No.1 လို့ အမည် ရှိတဲ့ ဂန္ဒဝင် စစ်ကားမှာ မင်းသမီး Kim Ha-neul, မင်းသား Yoon Kye-sang နဲ့ မင်းသား So Ji-sub တို့ပါဝင် ရိုက်ကူး ကြမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Koo Hye-sun and Oguri Shun Become Film Directors
Koo Hye-sun and Oguri Shun
ဒါရိုက်တာမင်းသမီး Koo Hye-seon
မင်းသမီး Koo Hye-seon (F4) ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံ မှာကျင်းပ ခဲ့တဲ့ Yubari International Fantastic Film Festival သို့ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး အဖြစ် တက်ရောက် ခဲ့ ပါတယ်။
Koo Hye-seon ဟာ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ရုပ်ရှင် များလည် ရိုက်ပါတယ်။ ထိုပွဲတော် သို့ ဂျပန် မင်းသား ဒါရိုက်တာ Oguri Shun လည်းတက်ရောက် ပါတယ်။
Koo Hye-seon, the director
မင်းသား Kwon Sang-woo ဆေးရုံတင်ရခြင်
Into The Gunfire အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး နေစဉ် မင်းသား Kwon Sang-woo ဒါဏ်ရာ ရခဲ့ ပါတယ်။ ရိုက်ကွင်း နဲ့ အနီးဆုံး Hapcheon မြို့ ဆေးရုံ မှာ တင်ပါတယ်။ နောက်တော့ မသက်သာ လို့ Seoul မြို့ ဆေးရုံသို့ ပြောင်းတင်ပြန် ပါတယ်။ အခုတော့ သက်သာ သွားပြီးလို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Actor Kwon Sang-woo injured while filming fight
End of Article - Hot News-26 March 2010
pollen April 25, 2011 - 4:51 am
ကိုရီး ယား သတင်း တွေ ကိုဖတ်ရတဲ. အတွက် အရမ်း ကိုသ ဘောကျပါ တ၇်။ ကျေး ဇူး လည်းတင်ပါ တ၇်။ နောက်သတင်း အသစ် တေါကိုလည်းထပ်ထည် . ပေး ပါ နော်။
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/485/hot-news-26-march-2010
Rendering time 0.0229 sec